“I xukmiya xilli ciyaareedka soo socda” – Eden Hazard – Gool FM
“I xukmiya xilli ciyaareedka soo socda” – Eden Hazard
Dajiye March 26, 2020
(Madrid) 26 Mar 2020. Xiddiga reer Belgium iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Eden Hazard ayaa fariin u diray taageerayaasha, taasoo ku saabsan xukunka ay ku rideen xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Los Blancos.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Eden Hazard, waxaana uu yiri:
“Xilli ciyaareedkeygii ugu horreeyay ee kooxda Real Madrid waa mid xun, laakiin ma ahan mid wada xun marka loo fiiriyo dhinacyada oo dhan, waa xilli ciyaareedkii la qabsiga”.
“I xukmiya xilli ciyaareedka labaad, iniga ayey ila muuqataa inaan qaab ciyaareed wanaagsan ku jiri doono xilli ciyaareedka soo socda”.
“Waxaan la kulmay shaqsiyaad cusub, aniga ahaan joogitaankeyga Real Madrid waxay ii tahay waayo aragnimo aad u weyn, waxaana wali ka harsan heshiiskeyga kooxda mudo afar sano ah”.
“Waxaan ku jiraa xaalad soo kabasho ah, Zidane ayaa i soo wacay shalay waxna ma uusan ka ogeyn dib ugu soo laabashadeyda markale ee horyaalka, waxa kaliya aan sameyn karo ayaa ah inaan ilaalino diyaargarowga jirkeena”.
“Waxba kama ogin in horyaalka La dhameystiri doono iyo inkale, laakiin waxaan rajeynayaa inuu jiri doono dhamaad aad u fiican ee xilli ciyaareedka ah iyo inaan inaan ciyaari karo, haddii kale wuxuu arrinka noqon doonaa mid niyadjab ah”.
Barcelona oo shaaca ka qaadday qiimaha ay ku iibineyso Griezmann & Ingiriiska oo looga gacan haatinayo
Hal arrin oo caqabad ku ah heshiiska Bayern Munich iyo Man City ee ku aadan ee Leroy Sane